Mercure Mandalay Hill Resort Hotel မှ Office Staff - Female (1) Post | MyJobs
/ Office Staff - Female (1) Post
၁. တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
၂. အသက် ၂၂ အထက်ဖြစ်ရမည်။
၃. Micro-Soft (work, Excel, E-male) အသုံးပြုတတ်ရမည်။
၄. အင်္ဂလိပ်စကား အသင့်အတင့်ပြောနိုင်ရေးနိုင်ရမည်။